Sary Vaovao an'ny Jeep Wrangler Hybrid mandritra ny fitsapana azy
Fotoana fanavaozana: 2020-09-28 15:44:35
Iray amin'ireo prototypes sarotra idirana amin'ny ho avy Jeep Wrangler hybrid plug-in dia nohazaina nandritra ny fitsapana ny arabe teny amin'ny faritry ny tanànan'ny Detroit. Ity sampana fitsapana an'ny kinovan'ny PHEV ho avy ity an'ny off-roader malaza dia mbola manatanjaka camouflage sy entana vitsivitsy vonjimaika.
Ny zava-baovao farany farany ao amin'ny Jeep Wrangler Ny range dia ny fampidirana ny motera V6 3.0 EcoDiesel vaovao, kinova mekanika vaovao atosiky ny diesel izay ho hita amin'ny karazany samihafa amin'ilay elanelana amin'ny lafiny roa amin'ny Atlantika. Na izany aza, ny zava-baovao ara-teknikan'ny taranaka JL vaovao an'ny Wrangler aza mifarana eto, Jeep Wrangler jiro mandeha no rafitra jiro tsara indrindra ho an'ny any ivelany, satria ny marika dia mamarana ny famolavolana kinova vaovao ary amin'ity tranga ity dia voalohany ho an'ny elanelana, satria izy no santionany voalohany amin'ny hybrid plug-in an'ny tantaran'ny fiara tsy mataho-dalana.
Ity dia iray amin'ireo fotoana vitsy nahitantsika ny fizahan-toetra ny vaovao Jeep Wrangler PHEV, miorina indray amin'ny kopian'ny Jeep Wrangler Tsy voafetra, ny vavahady 4-varavarana lava an'ny variant off-roader. Ny fotoana farany nahitanay ny prototype an'ity variana elektrika vaovao ity dia ny volana martsa lasa teo ary nanomboka io fahitana io dia toa tsy nivoatra firy ireo prototypes nampiasaina nandritra ny fizahan-toetra. Ankoatr'izay, ity santionany ity - nasongadina tao amin'ny famoahana amerikana PickupTruckTalk - dia manana endrika misimisy kokoa noho ilay hita tamin'ny lohataona lasa teo.
Ity prototype ity dia misy faritra sasany rakotra vinyl mainty, toy ny an'ny elatra eo an-kavanana, izay misy ny faladiany. Tsy toy ny vaovao Jeep Hybrida Compass sy Renegade, izay mametraka azy amin'ny faritra farany.
Ny fahatongavan'ity kinova mandeha amin'ny herinaratra vaovao ity dia efa nohamafisin'ny marika hatry ny ela, na dia mbola tsy naneho pitsopitsony teknika be loatra aza izy ireo, afa-tsy ny manana singa vitsivitsy namboarina tao an-trano ary tsy an'ny mpamatsy ivelany izany. Izany dia mahatonga antsika hieritreritra fa ny rafitra hybrid amin'ny ho avy Wrangler Ny PHEV dia hiorina amin'ilay iray ampiasain'ny Chrysler Pacifica, miaraka amin'ny 3.6-litatra V6 Pentastar izay hitantsika amina maodely maromaro ao amin'ilay vondrona, na dia amin'ity tranga ity aza dia miasa amin'ny tsingerin'ny Atkinson izy io. Ity sakana 6-varingarina ity dia hampifandraisina amina motera kely elektrika ary araka ny fanambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa amerikana, ny totalina mitambatra dia "manodidina ny 263 hp."
Ho fanampin'ny socket famatrarana eo aloha, ity Jeep Wrangler Ny prototype tsy manam-petra dia manana singa vonjimaika, toy ny optika anoloana, izay an'ny kinovan'ny eoropeana an'ny maodely na dia sedraina any Amerika Avaratra aza izy io. Amin'ny ambaratonga hatsarana dia tsy tokony hahita fahasamihafana momba ny kinova hafa ivelan'ny lalana isika.
Previous: Jeep Wrangler Mahazo miloka amin'ny seho SEMA 2019
Next: Fanontana voafetra vaovao Jeep Wrangler ary Gladiator Telo O Dimy